Sudoku lalao an-tserasera - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Fotoana mba hanadino ny momba ny taratasy gazety tamin'ny-tsaina, noho ny vanim-potoana ny fandrosoana teknolojia, ary ankehitriny ianao dia afaka mampandeha ny lalao Sudoku maimaim-poana amin'ny aterineto mba hilalao ao amin'ny toerana tena mahafinaritra, mifidy tsotra na sarotra indrindra dikan-izany. Tena zavatra maro ny sokajin-taona rehetra liana amin'ny alalan'ny fanomezana mba hametraka ny isa ao amin'ny sela mba tsy ho averina, fa mamorona ny mitovy isaky ny laharana. Manomboka amin'ny ohatra tsotra, raha toa ianao ka fahaizana, ka nahatsapa hery hiatrehana ny safidy sarotra kokoa, mihazakazaka ny mety asa.
Ady amin'ny Star Star
Fialana tany mahazatra
Faran'ny herinandro Sudoku 25
Sarin'ny trano fitsoahana
Hitsambikina ny lohasaha
Mandosira ny trano mavesatra
Faran'ny herinandro Sudoku 23
Fialana an-trano Amber
Faran'ny herinandro Sudoku 21
Sudoku Vaovao isan'andro
Lalao Sudoku Fun
Faran'ny herinandro Sudoku 06
Faran'ny herinandro Sudoku 05
Faran'ny herinandro Sudoku 01
Sudoku 30 Haavo
Lalao Sudoku tamin'ny Category:
Farany Sudoku lalao
Lalao Online Rehetra Sudoku lalao an-tserasera
Games Sudoku ny tena manam-pahaizana
Popularity lalao ara-tsaina ao amin'ny vanim-potoana mialoha ny solosaina dia tena avo. Ny zava-misy fa maro ny olona afaka hividy gazety fotsiny sy hamaha Fantatrao-tsaina, hamahana-tsaina, dia milalao Sudoku ho azony maimaim-poana amin'ny fotoana rehetra. Dia nisy boky manokana. Ny piozila-boky miompana dia efa manao fanamafisana eo amin'ny mpanjifa ny vokatra. Ny fahatongavan'ny solosaina nanosika crosswords faharoa. Raha ny marina, ny mety ny solosaina dia azo ampiasaina ho an'ny maro loko kokoa sy sarotra kokoa ny asa. Fa ny fotoana dia nampiseho ny lalao teo amin'ny talantalana. Ohatra, mba hilalao an-tserasera Sudoku mazàna mponina bebe kokoa ny aterineto. Ary ny zava-miafina eto dia tsotra – ao amin'ny vanim-potoana ny fahefana ny manganohano famolavolana sy ny mifanohitra loko, tsy tamin'ny fahitalavitra, fa koa ao amin'ny Global tambajotra, ny olona haka aina faniriana maso. A Sudoku miara-manome fahafahana ireo olona ireo haka aina amin'ny fampiasana. Rehefa dinihina tokoa, mba hamaha ireo zava-miafina dia mitaky fananana vitsy lojika. Ankoatra izany, milalao sudoku aterineto mahafinaritra kokoa. Rehefa dinihina tokoa, dia programan'ordinatera manana hery anaty lehibe kokoa. Tsy afaka mieritreritra momba izay tokony hatao manaraka rehefa hamaha ny piozila. Hiteraka fotsiny iray vaovao. Teny an-dalana, no mahatsiaro ireo maty maritiora gazety pejy izay tsy misy toerana eo amin'ny pensilihazo soratra sy ny erasure? Ny sisa amin'ny ordinatera izay tsy hitranga. Amin'ny ankamaroan'ny lalao, dia afaka hamaha Sudoku ao amin'ny mety tonian-dahatsoratra. Afaka nametraka ny tenanao fanamarihana, voasoratra ao amin'ny efitra rehetra ny efatra kidaladalan'ny olo-malaza. Mifanaraka amin'izany, dia mety kokoa sy intuitive. Na izany aza, dia afaka manao izany sarotra ho anao hamaha ny Sudoku dia tsy mandray soa avy endri-javatra rehetra ireo. Fa mpankafy misy ihany koa ny fandaharam-potoana sarotra indrindra, fa tsy misy fanazavana mampiseho anareo, afa-tsy izay mahatonga anareo izy ny lalana rehetra avy amin'ny vitsivitsy namerenana ho tanteraka mponina milalao an-tsaha. Ny toerana dia manome fahafahana tsy manam-paharoa mba hanatevin-daharana ny an'izao tontolo izao ho tsy manam-paharoa Multiplayer lalao ao an-tsaina ny misy lalao pitsiny. Rehefa avy milalao Sudoku aterineto dia manome fahafahana misy solosaina, ary izany dia midika fa tsy ho tsy misy ny toerana tena piozila.
ny tantara sy ny fitsipi-ny malaza lalao
Ny voalohany miovaova toy numerical Fantatrao Sudoku niseho tamin'ny taonjato faha-18, fa ny tena malaza nanatona Azy afa-tsy ny taona 1980, rehefa nanomboka pirinty-tsaina, ao amin'ny gazety Japoney. Sudoku fitsipika dia tsy dia sarotra – nitsinjaka saha Mizara ho sivy efamira, tsirairay izay ahitana ihany koa ny sela kely sivy hafa. Ny asa ny piozila – miditra ao amin'ny kianja kely tsirairay ny isa 1 ka hatramin'ny 9, fa tsy nisy famerenana ny rehetra tsipika marindrano sy mitsangana, ary tamin'ny tany rehetra ny vato kely sivy sela. Piozila tsirairay dia manana mpanampy tarehimarika efa napetraka tao kianja sy sasany tokony hamaha-tsaina, manomboka avy amin'izy ireo.
Ao amin'ny milalao sudoku maimaim-poana tsy afaka ihany koa taratasy, fa be dia be ny safidy izany Fantatrao Ve? Ao amin'ny Internet izay azo pirinty. Ankoatra izany, numerical Puzzles namorona ny fototry ny hametraka ny navigateur-monina mini-lalao, izay mamela Sudoku mba hilalao an-tserasera eo amin'ny solosaina. Io no fomba mety ho beginners – Raha ny marina, dia programan'ordinatera tononiny inona no isa azo ampidirina ao ny iray na ny hafa tavoara, ka izay no tsy navela teo. Tena matetika, rehefa manindry mpandefa ny mpilalao amin'ny sela, misy andianà numerical izay ny kitondro mifidy ny tiany safidy. Raha, ohatra, ao amin'ny laharana efa maro toy izany, dia soloina eo an-boaty fotsiny tsy hitranga. Na ny isa ao amin'ny boaty dia maitso, rehefa nametraka tao amin'ny toerana marina, ary ny mena raha fahadisoana no natao. Izany mamonjy be dia be ny fotoana, izay amin'ny taratasy Sudoku lany amin'ny Validation vahaolana.
Amin'ny Sudoku afaka milalao an-tserasera na dia amin'ny ambaratonga samihafa ny be pitsiny. Tsy misy fiantraikany ny isan'ny sela efa feno, ary ny fomba fiasan'ny ny famahana ny piozila. Ny iray amin'ireo safidy tsotra indrindra – rehefa ao amin'ny dingan'ny hamahana ny Fantatrao Ve? eo an-tsaha foana ny sela ho any izay afaka mampiditra isan'ny iray ihany. Fitaovana dika ny Sudoku afaka ora maromaro na andro. Tsy mora io haingana no iray amin'ireo lafiny mampiavaka Sudoku – ny mpilalao maka fanapahan-kevitra rehetra tsara, taratra amin'ny zavatra rehetra. Play Sudoku-tserasera ao amin'ity fizarana ity ny toerana araka izay azonao atao eo amin'ny mahazatra sy ny ankehitriny fa variants ny fomba mahazatra. Games miorina eo amin'ny fitsipiky ny sudoku tao amin'ny sakafo sy ny biby goavam-be muzzles mahafinaritra & hellip; Ohatra, misy voninkazo sudoku izay fa tsy ny isa ao amin'ny sela mba ampidiro miloko tsiry. Ao amin'ny lalao ity dia afaka misafidy ny haben'ny ny milalao an-tsaha mba zatra ny mampihavaka ny fahafinaretana amin'ny asa iray tena tsotra. Ary koa manome ny tsipiriany io, manondro ny voninkazo, tsy tafatoetra tsara eo amin'ny toerany.